Puntland oo ka hadashay qorshaha dowladda federaalka ah uga degsan khayraadka dalka – Radio Daljir
Puntland oo ka hadashay qorshaha dowladda federaalka ah uga degsan khayraadka dalka
Oktoobar 12, 2013 4:00 b 0
Garoowe, October 12, 2013 ? Dowladda Puntland ayaa ka soo hor jeensatay hadal dhowaan ka soo yeeray wasaaradda khayraadka ee Soomaaliya, kadib shir ka dhacay magaalada London oo looga hadlayey arrimaha shidaalka iyo khayraadka dalka.
Wasiirka khayraadka ee Soomaaliya Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo khudbad ka jeediyey shirkii arrimaha shidaalka ee London, waxaa uu sheegay in aysan waxba ka jirin heshiisyadii maamulada Puntland iyo Soomaaliland ay la galeen shirkado shidaal, isagoo xusay in dib u eegis lagu? samayn qoddobada dastuurka ee khuseeya khayraadka dalka.
?Shirkadaha shidaalka waa in ay kala xaajoodaan dowladda federaalka oo keliya macdanta iyo khayraadka dalka laga soo saarayo, ruqsadaha maamul gobolleeyada waa waxba kama jiraan.? Ayuu yiri wasiirka oo hadal ka jeediyey London.
Wasiiru-dowlaha qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland Dr. Sayid maxamed Cabdulle ?ayaa arintaas ka hadlay, isagoo tilmaamay in aysan masuuliyadi ku jirin hadalka ka soo yeeray wasiirka khayraadka ee dowladda federaalka ee Soomaaiya, waxaa uu xusay Sayid in ay dhowaan qaban doonaan shir looga hadlayo khayraadka Puntland.
?Waxaanu u aragnaa hadalka Dowladda Federaalka mid qayru masuulnimo ah hadalada noocaas ahina maahan kuwo ka turjumaya danaha umada Soomaaliyeed, waana kuwo sii wiiqaya rajadii laga qabay Xukuumada Madaxweyne Xasan Shiikh, Xaqna uma lahan inay wax ka bedel ku sameeyaan Dastuurkii Soomaali ku heshiisay ? ayuu u sheegay Dr. Sayid GaroweOnline sida aan ka soo xiganay.
Dowladda Puntland waxay ku celisay in aan la aqbali karin ?baaqa wasaarada khayraadka ee sheegaya in wax laga bedelo qoddobada arrimaha khayraadka ka hadlaya ee dastuurka Soomaaliya iyo dhismaha xeer hoosaadka cusub, waxaa uu sheegay mudane Sayid in ay wax laga xumaado tahay in Dastuurka lagu heshiiyey marba wax laga bedelo.
Hay?ada IMC oo adeegyo lagu ilaalinayo caafimaadka siisay dad ku baragkacay fatahada shabeelle
Madaxweyne Xasan ?Guri kasta waa in laga qiimeeyaa maalinta calanka, waalidku ha bareen caruurta?